झर्रोटर्रो : सरखारका दुई बर्से उपती – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
झर्रोटर्रो : सरखारका दुई बर्से उपती
हिज फागुन दुई गते भ्यालेन्टाइने दिनबाट नेपाल मण्डलको उखाने सरखारले दुई बर्से बुटो नाघेर तीन बर्समा पाइला टेकेको छ । त्यसैले यतिबेला सरखारले गरेका दुई बर्सका खती उपतीका बारेमा सडकदेखि सदनसम्म, चिया पसलदेखि भट्टी पसलसम्म र सिँगान पुछ्ने स्कुलदेखि चुल्ठेमुन्द्रे कलेजसम्म जताततै चर्चा परिचर्चा चलेकै छ । सरखारी पाटीका भक्तजनहर्ले सरखारका उपतीको पोको पन्तुरो खोलेर फुर्ती लाउँदै हिँडेका छन् । सदनमा दुईत्याई मत पाएर बनेको सरखारी पाटीले एकलौटी रुपमा सरखारी कुँडो लुँड्याएपछि प्रतिपक्षको दाम्लोले बाँधिएर बसेको पाटीले मुख मिठ्याउँदै हिजका दिनमा आपूmले हसुरेको सम्झँदै ¥याल चुहाउँदै सरखारी पाटीको सत्तोसराप गरिरहेको छ । यो वर्तमान परिप्रेक्षमा सरखारका दुई बर्से उपती के कस्ता भए भन्ने विषयमा यो कैलुले अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकालेको छ ।
आज सरखारका मुखिया उखानप्रसादले संसदमा भाषण गरेर आफ्नो दुई बर्से कार्यकालमा आपूmले गरेका उपतीहरुको बेलीविस्तार लाए । प्रस्तुत छ सरखारका मुखियाको भाषामा जस्ताको तस्तै उपतीहर्को सार सङ्क्षेप –
 सबैभन्दा पहिलो उपलब्धी (यसलाई झर्रो भाषामा उपती पनि भनिन्छ) दुई दुई बर्ससम्म हलचल नगरिकन सरखार स्थिर रहनु हो । कोई माइकालालले पनि सरखार ढाल्न सकेन । दुई थान पूरा र दुई थान आधा मन्तरी खान मधेशका मुखियाहरु आ’का थे । भेँडाको मुखमा कुबिन्डो नअटेझैँ भयो तिनरुलाई । ती पनि हाम्ले जस्तै मनपरी हसुर्न नपाएर ठुस्किएर हिँडे ।। सरखार त हलचल क्यै भएन ।
 आर्को कुरा यो दुई बर्समा हाम्ले यति धेरै भाषण गरेम कि अबको बीस तीस बर्सलाई पुग्ने भाषण गरिम । यो पनि हाम्रो महत्वपूर्ण उपती हो ।
 मैले सरखारको कुर्चीमा गजधम्म बस्नीबेला भनेको थेँ भ्रष्टाचारलाई सुन्नेमा झार्छु । भ्रष्टाचार आपूm पनि गर्दिन, अरुलाई पनि गर्न दिन्न । मैले बाचा पूरा गरेरै छाडेँ । भ्रष्टाचारलाई सुन्नेमा झारेँ । अहिले गाउँगाउँमा, होटेल, बस, स्कुल, क्याम्पस, पत्रपत्रिका, बुद्धिजिवि जताततै भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचारका कुरा गर्चन् । हाम्ले तिनका कुरा चुपचापले सुनिरहेका छम् । सुन्नेमा झारेको यै हैन त ?
 आर्को उपती भनेको पैला पैला भ्रष्टाचार गरेका समेतलाई अख्तियार लाएर सरखारले तिन्लाई ठिक पा¥यो । हाम्रा बिरोधी जति कसैलाई छोड्दैनम् हाम्रा भित्रियाहरुलाई छुँदै छुन्नम् । यो पनि महत्वपूर्ण उपती हो ।
 धनपैसोमा कसैले आँखा नलाओस् भनेर ठूलाठूला आयोजनाहरु सबैलाई पर्धानमन्तरीको मातहतमा ल्याएर म आफैँ शक्तिशाली बनेको छु । यो पनि उपती नै हो ।
 हाम्रो पाटीका हामी दुई थान मुखियाहर्ले पालो पालो सरखारी कुर्चीमा बिराजमान हुने हाम्रो सहमती थ्यो, ऐले म एक्लै पूरै अवधी कुर्चीमा बसिराख्ने सहमती हाम्ले आपसमा गरिम्, यो पनी हाम्रो उपती नै हो ।
 मैले पानीजाँज ल्याउने, रेल कुदाउने बाचा गरेको थेँ, पानीजाँज त नारायणी नदी र कोशीमा आइसक्यो । तीनकुनेमा त्यसको अफिस पनि खोलेकै हो । अफिसमा कर्मचारी बसेर गरिखानै सकेनन्, कोशीमा जाँज चलाउनै सकेनन् त मैले के गरुँ ? बाँदरको हातमा नरिवल ।
 यो दुई बर्समा चार पाँच थान मन्तरीलाई आलोपालो गरेर कुँडो खाने बातावरण बनाएँ । त्यो पनि उपती नै हो । पाँच बर्ससम्म पाटीका अरुलाई पनि कुँडो खाने चान्स मिलाइदिम्ला भनेर सोँचेकै छु ।
 बिरामी परेर बिदेश कति चोटी गइयो, टिचिङ र ग्राण्डीमा पनि हप्तामा दुईफेरा गएकै छु । त्यसमा करोडौँ बजेट परिचालन भएको छ । बजेट फ्रिज हुन दिइएको छैन । यो प िनमहत्वपूर्ण उपती हो । अझ बिदेश गएका बेला तउतैबाट भिडियोमा सरखारको बैठक बसियो । संसारमा कसैले नगरेको उपती हाम्ले गरिम् ।
 एमसिसिलाई खुरुक्क संसदमा छिर्न नदिएका भएर महरालाई ऐले डिल्लीबजारको खोरमा सजिलै छिराइदिइम् । यता छिराउन नजान्ने र नमान्ने जतिलाई उता सजिलोसित छिराउने व्यवस्था मिलाउनु पनि उपती नै हो ।
 एक मैनासम्म संसदलाई बन्धक बनाएर जेट बिमानका हामी दुई थान पाइलट घम्साघम्सी लड्दा लड्दा बल्ल तल्ल कुनै घुमाउरो बाटोबाट भएपनि एमसिसिलाई छिराइहाल्ने सहमती अनुसार दुई नम्बरी पाइलट गुटका केजाति आगोप्रसादलाई सभाको मुख बनाएका छम् । नाउँले उनी आगो भएपनि हामी दुईथानका अगाडि लुथ्रुकै पानी पानी भैहाल्चन् । यो पनि महत्वपूर्ण उपती नै हो ।
 कालापानीको नक्सा छिमेकका दोस्तीले आफ्नोमा गाभ्दा पनि हामी चुपचाप सहेर बसैकै छम् । वुद्धले हाम्लाई शान्तिको पाठ पढाएकै छन् । यो त वुद्धको देश पनि त हो । जस्ले जे गरे पनि हामी चुपचाप सहेर पचाइदिन्छम् ।
 पर्धानमन्तरी रोजगार कार्यक्रम लागू गरेर कत्रो उपती भएको छ । भिसा नलागेका, पैसा नभएर विदेश जान नपाएर सडकमा हल्लिएर रल्लिएका हाम्रो आफ्नै पाटीका भक्तजनहर्लाई पहेँलो ज्याकेट, टाप लाएर, बेल्चा, कुटो, हँसिया, झाडु समाएर सडकमै हल्लिएर तलब थाप्ने व्यवस्था मिलाइदिएका छम् ।
 चिया पसलदेखि चटपटेसम्म, कुखुरा, बाख्रा, सागसब्जी लाउने किसान, सबैलाई हग्दा मुत्दासम्मको कर लगाएर भोटर रैतीजनहर्लाई ढाडै भाँचेका छौँ । यसले सरखारको ढुकुटीमा त कति हो कति पैसो थुप्रिएको छ । हाम्लाई हसुर्नै हम्मे हम्मे परेको छ । तल तलका थानीय सरखारका धनप्रतिनिधिहर्ले कर असुलेर थुपारेको बजेट कसरी खर्च गरम् भनेर गाडि, घोडा, मोटर साइकिल, ल्यापटप, कम्युटर खरिदेर धनप्रतिनिधिहर्लाई धमाधम बाँडेका छन् । घरघरमा सिँहदरबार भनेको यै हो ।
 भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रियसभाको चुनाउमा सरखारी पाटीले मात्रै सबै सीट जित्यो । यसैगरी छ बर्ससम्म राष्ट्रियसभामा कोई एक जना पनि विपक्षी पाटीको रहने छैन । सतप्रतिशत हाम्रै मात्र हुन्च । त्यो झन् महा उपती हो ।
 संविधान संविधानलाई गोली मारेर हाम्ले तीन नम्बर पर्देशका मान्नेहर्लाई खुरुक्क नाउँ बागमती र राजधानी हेटौँडा तोक भनेर आदेश जारी गरिम् । अब पाँच नम्बर र एक नम्बरलाई पनि यसैगरी आदेश दिएर ठिक पार्चम् ।
 बाल्वाटार काण्ड, सुनकाण्ड, सिण्डिकेट काण्ड, निर्मला काण्ड, कालापानी काण्ड, एमसिसि काण्ड, ठेकेदार ठिक पार्ने काण्ड, मिडिया विधेयक काण्ड, यति होल्डिङ्स काण्ड, होली वाइन काण्ड, वाइडबडी काण्ड आदि इत्यादि यस्ता काण्डैकाण्डको नेतृत्व गर्न पाउनु सरखारको महत्तमातित महत्वपूर्ण उपती हो सभाका मुख महोदय ।